AMISOM oo beenisay wararka sheegaya in dad badan ku laayeen duleedka Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	AMISOM oo beenisay wararka sheegaya in dad badan ku laayeen duleedka Muqdisho
written by warsan radio 25/10/2017
Afhayeenka Ciidamada AMISOM Wilson Rono ayaa beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada oo sheegaya in dad badan ay ku laayeen duleedka Muqdisho, kaddib markii ciidankooda lagu qaaday weerar qarax iyo iska hor imaad toos ah.
Wilson Rono oo la hadlayay Wakaalada wararka ee SONNA ayaa sheegay in weerarkaas uu uga dhintay hal askari, halka mid kale uu ka dhaawacmay, sidoo kale waxaa uu xusay in labo ruux ay ku geeriyoodeen weerarka.
Warbaahinta maxaliga iyo kuwa baraha bulshada ayaa lagu baahiyay wararka sheegaya in AMISOM ay dad badan ku dileen deegaanka Lafoole.
Ilo madax banaan ayaa sheegaya in rasaas ay fureen Ciidamada AMISOM ay dad rayid ah wayxeelo ka soo gaartay, kaddib markii qarax lala eegtay.
Wariye u shaqeeyay Idaacad Maxali ah oo ku taal degmada Afgooye, oo lagu magacaabo Jacfar Cali Daacad oo Macalin ka ahaa Iskuul ku yaal Lafoole ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay rasaastii ay fureen Ciidamada AMISOM.
Ma ahan markii u horeysay ee weerar lagu qaado Ciidamada AMISOM ay ku waxyeeloobaan dad rayid ah, waxaana badana dhacda in marka Ciidamada lagu weeraro jidadka in sidoo kale ay dadka rayidka waxyeelo ka soo gaaraan.
AMISOM oo beenisay wararka sheegaya in dad badan ku laayeen duleedka Muqdisho was last modified: October 25th, 2017 by warsan radio